06 Apr, 2018 - 00:04	 2018-04-05T16:01:54+00:00 2018-04-06T00:00:38+00:00 0 Views
MAKADII veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 22 nemwana 1, ndinotsvagawo murume ane makore 28 – 32 ane mwana wakewo, kunyanya ari kuda zvekuroora. Nhare yangu 0735 578 197.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 30, ndodawo musikana ane makore 20 kusvika 25. Nhare yangu 0773 931 253.
Makadii? Ndoda murume mupositori ane makore 50 kusvika 65 ari pamushonga uye akafirwa. Ndine mwana mumwe, ndiri mugari weMt Darwin. Zvizhinji tozotaura pa0771 614 911.
Ndiri mukomana ane makore 27, ndodawo musikana ane makore 22 – 25 akanaka anoda imba. Nhare yangu 0773 157 128.
Ndiri murume ane makore 36, HIV positive uye ndinotsvakawo mukadzi wekuroora ari pamushonga seni asi asingaratidziki. Ngaave asina mwana anoendawo kubasa achitya Mwari, ane makore 19 kusvika 24. Andifarira ndibate pa0715 282 817.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30 nemwana mumwe, ndiri kudawo mukadzi ane makore 25 zvidzika ane mwana mumwe uye asiri pamushonga. Nhare yangu 0735 043 253.
Ini ndodawo shamwari yechikadzi ndinogara kwaChivi. Nhare yangu 0776 976 616.
Ndishambadzeiwo, ndiri murume ane makore 38. Ndinodawo mukadzi wekuroora anoda zvemba, ndiri pamushonga. Nhare yangu 0775 538 469.
Kwayedza ndodii kuti mundishambadzewo, ndaneta nekunyorera? Ini ndiri mukadzi ane makore 42 ndotsvagawo murume wekushamwaridzana naye ane makore 45 – 50. Anoda ngaandibate pa0774 155 084.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 25, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20. Anoda nezvangu foni dzangu 0776 045 831, sms ndinogamuchira.
Makadini veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 41, ndinotsvagawo mudzimai. Andifarira ndibate panhamba dzinoti 0779 038 794, ndatenda.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 35 nemwana 1, ndinodawo murume akatendeka anoenda kuchechi asi matsotsi kwete. Ngaandibate pa0776 897 773.
Makasimba? Ndiri murume ane makore 35 ndinotsvagawo mukadzi akanaka chimiro uye anogeza. Anoda ngaandibate pa0771 193 408.
Ndiri mukadzi ane makore 29 nevana vatatu, ndiri kutsvagawo murume ari serious. Handisi pamushonga, nhare yangu 0783 523 824.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo mudzimai wekuroora ari pachokwadi ane makore 18 kusvika 24. Ndine makore 26, ndoda vari muHarare. Nhare yangu 0776 795 909.
Makadii hama? Ini ndine vana 2, Ndinoda mudzimai anotya Mwari, anoda kuongororwa ropa ane makore 35 – 40. Nhare yangu 0718 273 386.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 21, ndotsvagawo mukomana ane makore 23 kusvika 25 anoshanda uye anonamata. Anoda ngaandibate pa0783 959 021.
Makadii hama neshamwari? Ndiri mukomana ane makore 26 okuberekwa, ndotsvagawo musikana akanaka, anogeza. Ndogagara muHarare mumusha mukuru weHighfield. Andifarira ngaandibate pa0713 141 313.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 40, ndinotsvagawo murume akavimbika anotya Mwari uye ari pachokwadi chekuroora. Ndoda ane makore 45 – 48, ane mwana 1 kana vaviri. Pahutano ndiri negative, ndoda asingasvuti fodya, akarongeka uye akashambidzika. Nhare yangu 0713 859 482.
Chekutanga ndinokwazisa mese hama neshamwari dzeTishamwaridzane, iniwo ndiri mudzimai wemakore 36. Ndinotsvagawo murume ari pachokwadi anoda zvekuwana. Ndine vana vaviri, ndinogara kwaMurehwa. Andifarira ngaandibatewo pa0718 666 951.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 22 asiri pamushonga. Anondida ngaandibate pa0775 351 656.
Ndiri mukadzi ari kutsvagawo murume ane makore 27 nemwana mumwe. Ndiri muHarare, nhare yangu 0715 237 722.
Makadini? Ini ndiri murume ane makore 43, ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora. Andifarira ngaandibate pa0775 592 337.
Ndine makore 42, HIV negative uye ndinodawo murume ane makore 45 kusvika 50 anonamata. Ane rudo ngaandibate pa0735 105 161.
Ndiri murume ane makore 40 nemwana mumwe, ndinotsvagawo mudzimai anoda zvemba akashambidzika. Ngaave anoda kutorwa ropa asingagariri mawoko. Nhare yangu 0713 312 243.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 35 nemwana 1, HIV negative uye ndotsvagawo murume wekufambidzana naye
Anoshanda, anogeza. Ndinoshanda, ngaave ane mwana 1 kana 2 ari HIV negative ane makore 38 – 45. Asina mukadzi ari pachokwadi fona pa0718 805 139.
Ndinoda murume ane makore 25 kusvika 40, ini ndine makore 22. Ndiri pamushonga, nhare yangu 0717 872 676.
Ndiri murume ane makore 45, ndotsvagawo mukadzi ane makore 22 kusvika 30 akanaka wekuroora. Ndoshanda kuSouth Africa, anoda ngaandibate pa0778 309 095.
Ndiri musikana ane makore 24, ndinotsvagawo murume ane makore 32 – 35. Ndinobatika pa0777 710 387.
Makaita basa veKwayedza, ndakazomuwana wandaitsvaga saka vose vachiri kufona pa0783 695 117 ngavachirega havo.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 19 ekuberekwa uye ndinotsvagawo mukomana ane makore 25 zvichidzika. Andifarira ngaandibate panhare yangu 0779 430 040.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 24 ndinodawo musikana ane makore 18 kusvika 22 anoda kutorwa ropa. Ane mwana kana 1 ngaandibate pa0783 822 752.
Makadii zvenyu? Ndiri mukomana ane makore 27 ndotsvagawo musikana akanaka ari serious ane makore 21 zvichidzika ane rudo. Nhare yangu 0773 055 958.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 26 ndinotsvagawo shamwari (penpal). Anoda ngaandibate pa0785 109 903, ndinonzi Mai Tanaka.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 29, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 26 chero ane mwana 1. Asina chirwere ngaandibate pa0737 914 303.
Makadiniko veKwayedza? Ndiri murume ane makore 37 nemwana 1, ndiri HIV positive uye ndinodawo mukadzi ane makore 28 kusvika 34 ane mwana 1 kana 2. Ndinobatika pa0776 472 412.
VeKwayedza makadiyi henyu? Ndiri mudzimai ane makore 21 nemwana 1, ndinodawo murume anoenda kubasa. Ari negative anogara muHarare ngaandibate pa0784 525 440.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 21 nemwana 1. Ndinotsvagawo murume wekuroorana naye ane makore 23 – 30. Nhare yangu 0784 643 256.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 41, ndinotsvagawo murume ane makore 45 kusvika 50 anoda zvemba uye asina mukadzi. Ndiri negative saka ndiri kutsvagawo ari negative. Vandifarira fonai ndinogara muHarare uye ndinoshanda. Handina mwana, nhare dzangu 0715 516 340.
Makadii veKwayedza? Ndakambonyorera asi shambadzo yangu haina kubudiswa, ndingafare zvikuru ikabudawo. Ndiri mudzimai ane makore 32, ndinotsvagawo murume ane makore 35 kusvika 45 ari pamushonga asingaratidzikewo. Ndine mwana 1, ndodawo ane vana 2 kana 3. Andifarira anondibata pa0716 858 881.
Makaita basa veKwayedza, ndakawana anoenderana neni kuburikidza nemi. Zvinotendwa, God bless you. – 0773 660 874.
Makadii veKwayedza? Ndinodawo mukadzi ane makore 20 zvichikwira. Zvakawanda totaura, andida ngaandibate pa0775 957 616.
Aleluya veKwayedza! Ndiri murume ane makore 34 nevana 2. Ndodawo musikana kana mukadzi anozvinzwa kuti ndakabatana asinganwi. Ngaandibate pa0736 682 702.
Makadii veTishamwaridzane? Ndinotenda nechirongwa chino ndakamuwana mudzimai. Murambe makadaro, vamwe chiregai kufona zvenyu pa0713 546 680, zvangu zvakaita. Tatenda.
Ndiri mudzimai ane makore 43, ndinotsvakawo murume ane makore 50 zvichikwira wekuchengetana naye. Ngaave anotya Mwari, ndiri pamushonga. Nhare yangu 0717 883 714.
Ndiri mukadzi ane makore 30 nemwana mumwe chete. Ndinotsvagawo murume ane makore 35 kusvika 40 ari pachokwadi anoda zvekuroora. Ngaave anoshanda nekuti ini ndinoshanda. Nhare yangu 0735 673 499.